Handray andraikitra mikasika ny fanetsehana ny antoko Tiako I Madagasikara ny mpitondra tenin’ny Filoha RAVALOMANANA. Araka ny voalazan’i Guy Rivo Randrianarisoa dia « tapitra ny fotoana namitana ny iraka mikasika ny fijerena ny zava-mitranga eto an-tandrazana » ary dia handray andraikitra amin’izay ny tenany manomboka eto. Nanome toky ireo mpiara-mitolona rehetra ihany ko izy fa tsy hisy afaka hanozongozona ny tenany amin’ny foto-kevitra ijoroany indrindra mikasika ny fikasan’ny sasany hitady fanambarana ny TIM amin’ireo antoko najorony teo am-pisitahana ny Ankolafy. « Tokana ny TIM » hoy ny mpitondra tenin’ny Filoha RAVALOMANANA « ary naman’ny mpandroba ihany koa izay misandoka ho tompony ».
Nampahatsiahiviny mantsy fa ny fikambanana Tiako Iarivo najoron’ny Filoha RAVALOMANANA fony izy nilatsaka ho ben’ny tanana no nivadika ho antoko Tiako I Madagasikara rehefa nanapa-kevitra hirotsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena ny tenany. « Mpiara-miasa ihany izay rehetra nanana andraikitra ambony tao » hoy hatrany Guy Rivo Randrianarisoa.
Tsy hamaly faty …
« Raha mbola hisy ny fanakanana ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA » hoy Guy Rivo Randrianarisoa « dia noho ny tahotry ny FATE amin’ny fandraisany andraikitra eto amin’ny Firenena izany ». Lazaina indray manko ankehitriny fa atahorana hamaly faty ny Filoha RAVALOMANANA ka izay no antony tsy mampety ny fiverenany. Efa ela ny Filoha no nanamafy fa ny hitondra fampandrosoana ho an’ny Malagasy no anokananany ny andro sisa iainany. Nambaran’ny mpitondra teny arak’izany fa misy toe-tsaina tokony hovaina mihitsy eo amin’ny tsirairay mba tsy ho sodokan’ny akanga tsara soratra sy ny tsaho etsy sy eroa fa hijoro tsara amin’izay efa nitolomany.
Mikasika ny Ankolafy RAVALOMANANA manokana dia tokony izay vaovao mivoaka avy amin’ny foibe ihany no iraisan’ny tsirairay mba hanamafisana ny firaisan-kinan’ny zanak’i Dada. Mikasika ny resaka ministeran’ny fitsinjaram-pahefana moa dia nambaran’i Guy Rivo Randrianarisoa fa tsy mbola nangataka toerana ny tenany hatrizay ary tsy izao mihitsy izy no hanao izany. « Ny fantako » hoy izy « dia tonga eto Madagasikara ny Filoha RAVALOMANANA ary mifanome tanana isika hampandaniana azy ».
« Tsy misy atahoran’ny mpandala any ara-dalàna ny fandalovan’i Simao eto Madagasikara » araka ny nambaran’ny CT Sely avy any Vakinankaratra. Raha ny fampitam-baovao nentiny teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia « Rajoelina no nanasa an-dry Simao fa tsy hamita iraka avy amin’ny SADC akory izy ». Marina tokoa fa tena niteraka ahiahy ny mety ho fiverenan’i Simao ao anatin’ny fanelanelanana satria efa nandamoka izany tao anatin’ny taon amaro. Raha marina kosa aefa ity vaovao iray ity dia azo vinavinaina ny mety hisian’ny fivarotan-tany amin’ny mozambikana indray. Raha ny tsilian-tsoafina mantsy dia toa misy ifandraisany amin’ny resaka fifidianana izao fanasana ataon’ny FATE ho an-dry Simao izao.
Na izany na tsy izany dia mafana kokoa ny toe-draharaha. Indrindra fa mnangasanga ny herinandro farany amin’ny 60 andro nangatahin’ny SADC hanaovana « évaluation ». Manoloana izany indrindra dia samy miezaka manetsika ny sehatra misy azy avy ny hery velona ao anatin’ny Ankolafy RAVALOMANANA. Misy arak’izany ireo fihaonana isan-tokony entina hamelombelomana ny vondrona na fikambanana isan-tsokajiny. Isan’ny mavitrika amin’izany ny antoko Tiako I Madagasikara ka sady misy ny fandraisana an-tanana ny fanafanan ny Kianja no tsy mitsahatra ihany koa ny fanentanana ny any an-tanàana mba ho vonona lalandava amin’ny fotoana ifampiantsoana.
Zaza Malagasy 50 eo ho eo no nandray fanampiana avy amin’ny fikambanana « erikerika Madagasikara » amin’izao fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra izao. Hafa raha samy ankizy anefa izy ireo satria gadra politika ny rainy. Mavesatra hoan’ny fianakaviana ny ziogan’izy ireo satria ny andry iankinana mihitsy no baboina amin’izao fotoana. Ireo miaramila ireo rahateo dia efa tapaka karama avokoa ny ankamaroany nefa fitakiana ny fahamarinana no antony nijoroany.
Manoloana izany ary dia misy ihany koa ny fifanakalmozam-baovao eo amin’ny fianakaviana sy ny depiote Jules Andriamaholison izay sady mandrindra ny sosialy ao amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA no mpikambana feno amin’ny « erikerika Madagasikara » ihany koa. Fitaovam-pianarana no natolotra ny zaza ary nisy ihany koa ny fanampiana ara-bola hanamaivanana ny saran’ny fampidirana mianatra.
Araka ny fanazavana dia miezaka manamaivana ny fahasahiranan’ny mpiray tanindrazana ity fikambanan ity amin’izao krizy politiika izao. Efa nisy ny fitondrana ny tsirambin’ny tanana ho an’ireo niharam-boina noho ny rano be tamin’ny fahavaratra. Izao fanampiana ny gadra politika izao kosa dia efa andiany faharoa. Mbola misy ihany koa anefa ny tetikasa goavana izay hatao eny Andohatapenaka sy ny manodidina hiatrehana ny fahavaratra.